Sony dia manolotra ny gadget ho an'ny Internet of Things | Androidsis
Sony dia manolotra gadget efatra mifandray: Xperia Ear, Xperia Eye, Xperia Projector ary Xperia Agent
Omaly alahady somary moana ihany izahay rehefa nanomboka ny hetsika LG ary nanomboka izy ireo ampahafantaro ny smartphone G5 modular voalohany Azonao atao ny mampifanaraka ireo "namana" sasany izay manolotra toetra lehibe kokoa amin'ny fakan-tsary na amin'ny feo amin'ireo plugins roa ireo, na inona ny andiana kojakoja misy izay ahitantsika 360 VR, 360 CAM ary Rolling Bot. Solomaso virtoaly virtoaly miaraka amin'ny LG 360 VR, fakan-tsarimihetsika fakantsary ao amin'ny LG 360 Cam haka sary avo lenta 360 degre na Rolling Bot, sehatra iray izay mihodina tahaka ny baolina iray ary mirakitra sary sy horonan-tsary amin'ny alàlan'ny fakan-tsary. -amin'ny 8MP. Ny tanjon'i LG dia ny manolotra andiana "mpiara-dia" aminy izay hitrandrahana indrindra ny lohany amin'ity taona ity amin'ny fahalianana mazava amin'ity "Internet of Things" ity.
Amin'io lafiny io ihany dia hitantsika androany i Sony fa, ankoatry ny mahagaga ny rehetra amin'ny alàlan'ny fandefasana ny andiany X vaovao, dia naneho an'izany koa tena liana amin'ny "Internet of Things" miaraka amina gadget efatra manokana izay misy karazana headset bluetooth, fakan-tsary azo anaovana, projecteur mitsangana ary robot amin'ny fomban'ny Rolling Bot avy amin'i LG. Noho izany dia miatrika greats roa isika izay miloka amin'ny andiana mpiara-miasa mba hahazoany tombony betsaka amin'ireo fahaiza-manao manan-danja ananan'ny telefaona finday ary amin'izany no ahafahan'izy ireo manalavitra ny marika hafa mifantoka bebe kokoa amin'ny fahazoana smartphone. famolavolana tena tsara, fitaovana tsara ary vidiny mirary sy takatry ny saina.
1 Sony Ear, ilay hananantsika tsy ho ela
2 Ireo foto-kevitra telo hafa
Sony Ear, ilay hananantsika tsy ho ela
Tokony holazaina izany ireo vokatra efatra nasongadina Amin'ny maha-kojakoja ho an'ny laharana Xperia X vaovao, dia iray ihany no kasaina havoaka amin'ny fahavaratra, satria ny ambiny, ny telo ambiny, dia foto-kevitra fotsiny izay tsy maintsy havoaka ary ambara amin'ny fotoana mety. Zavatra tsy ampoizina ary miahiahy isika raha tsy nivoatra tamin'ny minitra farany i Sony mba tsy hijanona eo alohan'ilay fampisehoana miavaka ny G5.
Ka amin'izao dia afa-po izahay Horonan-tsary momba ny Internet amin'ny ho avy avy amin'i Sony izay hanomboka ny lalany amin'i Sony Ear. Tena mahaliana ity fitaovana ity, satria anisan'ireo fahaiza-manaony ny fandefasana sy ny famakiana hafatra an-tsoratra amin'ny alàlan'ny baiko am-peo, ary ny fahaiza-manao iray hafa izay tsy maintsy misy amin'ireo asa manokana ireo. Anisan'ny sasany azontsika atao ny mitanisa ny fampandrenesana momba ny fifamoivoizana, ny toetr'andro na ny fandefasana adiresy rehefa mampiasa GPS, satria mifandray amin'ny fitaovana ampiarahina amin'ny telefaona isika.
Un mpanampy virtoaly tena manokana hahafahantsika "mandalo" an-tariby mandritra ny fotoana fohy hisolo ny Google Now. Mahazo antso izahay ary mandray izany mivantana mba hahafahan'ny sensor akaiky an'i Ear mandalo ilay antso, na andiana hetsika hafa toa ny fahafantarana ny fomba fahandro manokana momba ny fandrahoana sakafo amin'ny alàlan'ireo baiko am-peo ireo sy ny karoka amin'ny Internet. Ny fanirian'i Sony dia ny hoe tsy mila mampiasa telefaonin'izy ireo ny mpampiasa fa kosa mampiasa Ear.
Ireo foto-kevitra telo hafa
Xperia Eye dia karazana fakantsary hahafahan'ny mpampiasa maka sary izany nefa tsy mila manindry bokotra akory. Ny Xperia Projector dia azo antoka fa iray amin'ireo mahaliana indrindra ary hamela anao hiasa sy hifandray amin'ireo sary amin'ny faritra malama toy ny latabatra na rindrina. Farany, manana ny Agent Xperia izahay ho karazana robot kely miarahaba ny tompony.
Farany, miatrika ny fiezahan'i Sony hitondra anay ny Aterineto izahay raha ny zava-mitranga amin'ny an'ny LG manokana sy tena izy. Ny azonao zarina dia ny hoe, raha manana takelaka, finday avo lenta, fantsom-pahalalana na fehin-tanana ao an-trano ianao ho toy ny fitaovana finday, afaka taona vitsivitsy dia ho lasa robot, fakantsary 360 manokana na solomaso zava-misy virtoaly izay hanampy an-trano kokoa noho ny hatramin'izay ny teknolojia. Andao, mila manana valizy manokana isika hitondra ny gajinantsika sy tariby tariby tsara hahafahana mameno azy rehetra, raha tsy hoe esorin'izy ireo tsy ho ela ny "bateria izay hamaha ny zavatra rehetra."
Ankehitriny dia hisy ihany koa ny safidy solon'ny mpanamboatra hafa ao anatin'ny roa taona ho avy hisintona anay na aiza na aiza izy ireo hividianana ny robot-nao na ny drone manidina anao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Sony » Sony dia manolotra gadget efatra mifandray: Xperia Ear, Xperia Eye, Xperia Projector ary Xperia Agent
Mediatek Helio P20 Processor dia afaka misoroka ny famandrihana bateria isan'andro